स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ – Kanika Khabar
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ
Kanika Khabar २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १२:४५ June 4, 2020 मा प्रकाशित
जेठ २२, काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र व्यावस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेललाई मन्त्रालयमा तानेको छ । आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसहित ६ जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको होे । त्यसैगरी डा.दीपेन्द्ररमण सिंहलाई विभागको नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका निर्देशक डा. रमेश खरेललाई लगिएको छ । मन्त्रालयले परोपकार प्रसुति गृह थापाथलीका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमलाई पनि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । उनको ठाउँमा डा. संगीता कौशललाई लगिएको छ ।